Sabboonummaa : Alaabaa Oromoo ol qabaa diina garaa gubaa... 1991 Kichuu
HomeAfaan OromooVideosSabboonummaa : Alaabaa Oromoo ol qabaa diina garaa gubaa… 1991
Sabboonummaa: Alaabaa Oromoo ol qabaa diina garaa gubaa… 1991
“Namichi kun ijoollee #Amboo mana hidhaatti guursisaa jira.
Gocha Tplf waliin hojjechaa ture; ammas itti fufee jira”
Kan ajjeeses, kan du’es Wayyaanee dha. Wayyaaneen wal ajjeesuun Oromoof hiree gaarii dha. Silas, nuun maaltu galche! Nuti jiruu biraa qabna: qabsoo Bilisummaa Oromoo!!
Lubbuu darbeef garuu ni gaddina!!
Hiriira balaaleeffannaa ummanni WBO irratti baye nuun jetti laata? OBN lakkoofsi 1ffaa fi lakkoofsi 2ffaan OMN?
Mootummaa Amma jiru kanatti fonqolcha yaaduun Akkas nama gooti !
— Kichuu (@kichuu24) July 8, 2019
“Badhaasi kun kan uummata Oromooti” Dr.Kabajaa Alii Shabboo